Iimveliso ze-SPL: Umzi mveliso we-Photovoltaic
Amandla elanga e-Photovoltaic afunyanwa ngokuguqula ilanga libe ngumbane usebenzisa itekhnoloji esekwe kwimpembelelo yefoto. Luhlobo lwamandla ahlaziyekayo, angenakutshiswa kunye nongangcolisiyo anokuveliswa kufakelo olususela kwiijenereyitha ezincinci zokuzisebenzisela ukuzisebenzisa ukuya kwizityalo ezikhulu zefoto.
Nangona kunjalo, ukuvelisa eziPaneli zeSola yinkqubo yeNdleko, esebenzisa izixa ezikhulu zaMandla ngokunjalo.
Konke kuqala ngento eluhlaza, kwimeko yethu sisanti. Uninzi lweepaneli zelanga zenziwe nge-silicon, elilelona candelo liphambili kwisanti yolwandle yendalo. I-Silicon ifumaneka kakhulu, isenza ukuba ibe yinto yesibini ekhoyo eMhlabeni. Nangona kunjalo, ukuguqula isanti kwi-silicon ekumgangatho ophezulu kuza ngendleko eziphezulu kwaye yinkqubo yamandla ngamandla. Ukucoceka okuphezulu kwesilicon kuveliswa kwisanti ye-quartz kwisithando somlilo kwiqondo lobushushu eliphezulu kakhulu.
Isanti yeQuartz iyacuthwa ngekhabhoni kwiziko lombane lobushushu kumaqondo obushushu> 1900 ° C ukuya kwibanga lesinyithi lesinyithi.
Ke ngoko, ngokungqongqo, imfuneko yokupholisa ifuneka kakhulu kolu shishino. Ukongeza kokupholisa okusebenzayo, umgangatho wamanzi ukwabalulekile kuba ukungcola kuya kubangela ukuvalwa kombhobho wokupholisa.
Ngombono wexesha elide, uzinzo lwesiphaluka esivaliweyo sokupholisa inqaba siphezulu kakhulu kunokuba sitshise ubushushu. Ke ngoko, i-SPL ikwacebisa ukuba i-Hybrid Cooler iyisuse ngokupheleleyo inqaba yokupholisa evulekileyo ngomtshiso wobushushu.
Ezona mpawu zinkulu zahlukeneyo phakathi kwe-SPL Hybrid Cooler kunye nenqaba yokupholisa yesekethe evaliweyo kunye nenye inqaba yokupholisa yile: Ukusetyenziswa kobushushu bangaphakathi bokupholisa inqaba yokupholisa amanzi eyahlukileyo yezixhobo (zamanzi angaphakathi) kunye namanzi okupholisa kwinqaba yokupholisa (amanzi angaphandle) ukuqinisekisa ukuba ukupholisa amanzi ahlala ecocekile xa kuphosa okanye ukufudumeza izixhobo. Kwimeko apho, kuyimfuneko kuphela ukucoca inqaba enye yokupholisa endaweni yayo yonke imibhobho yamanzi okupholisa kunye nezixhobo.